merolagani - स्टिभ जब्सको सफलताको कथा – कसरी सुरु भयो एप्पल कम्पनी ?
स्टिभ जब्सको सफलताको कथा – कसरी सुरु भयो एप्पल कम्पनी ?
May 11, 2022 06:15 PM Merolagani
आईफोन अथवा एप्पल कम्पनी, आजको पुस्ताबीच यो नामसँग परिचित नभएको कमै होलान्। सो कम्पनीका संस्थापक स्टिभ जब्स हुन्। उनलाई संसारको सबैभन्दा ठूला अन्वेषक पनि मानिन्छ।
स्टिभ जब्सको जन्म २४ फेब्रुअरी १९५५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै उनलाई पढाइमा धेरै रुचि थियो। उनले आफ्ना दुई कक्षा माथिका बच्चाहरु जति नै बुझ्थे। उनका शिक्षकले पनि स्टिभलाई अर्को कक्षामा बस्न दिनु भनी आमाबुवालाई भन्थे। उनी पढाइमा निकै होसियार थिए।
स्टिभ जब्सको प्रारम्भिक जीवन
स्टिभ जब्स आफ्नो बुबाको ग्यारेजमा उनलाई मद्दत गर्न जान्थे। पछि १२ कक्षापछि रीड कलेजमा भर्ना भए। केही समय कलेजमा पढे तर पछि कलेज छोड्ने निर्णय गरे। यसको कारण के हो भने, उनले आफ्नो पढाइमा आमाबुवाले लगानी गरेको पैसाको कुनै मूल्य देखेनन्।
जब उनले कलेज छाडे, त्यस समयमा उनी अलिकति डराएका थिए। उनले सोही समयमा क्यालिग्राफी पनि सिके जुन उनले किन पढ्दै थिए भनेर आफैलाई थाहा थिएन। तर पछि उनले एक भाषणमा भने कि त्यो क्यालिग्राफीको कारणले गर्दा उनले म्याकेन्टोसमा फन्टहरूको लागि प्रेरणा पाए।
कलेज छोड्दा उनीसँग पैसाको निकै कमी थियो। उनले कोकको खाली बोटल बेचेर पनि पैसा कमाउने गर्थे। उनी हरिकृष्ण मन्दिरमा सित्तैमा खाना खान जाने गर्थे। उनी सोही समयमा बुवा नीम करोलीलाई भेट्न भारत आएका थिए। तर त्यतिन्जेल बाबा नीम करोलीको मृत्यु भइसकेको थियो। तर उनले भारतमै बसेर अध्यात्म साधनाको अभ्यास गरे। भारत उनलाई धेरै मन पर्यो। सन् १९७५ मा उनी अमेरिका गएर एप्पल सुरु गरे ।
एप्पल कम्पनी कसरी सुरु भयो?
स्टिभ जब्सले पछि सन् १९७५ मा आफ्ना साथी स्टिभ वोज्नियाकसँग एप्पलको सुरुवात गरे। सुरुमा कम्पनीसँग पैसा थिएन, त्यसैले स्टिभ जब्सले आफ्नो कार र टाइपराइटर आफ्ना साथीलाई बेचेर कम्पनी सुरु गरे। पछि, १९८० को आसपास, कम्पनीको आईपीओ आयो, त्यो आईपीओ धेरै सफल भयो, उनको एप्पलको भ्यालुएसन निकै छिटो बढ्यो। एक दिन स्टिभ जब्सले पेप्सीका सीईओ जोन कलीलाई भेटे। सोपश्चात जोन कलीलाई कम्पनीमा ल्याइयो भने कम्पनीले राम्रोसँग वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने स्टिभ जब्सलाई लाग्यो।
पछि जोन कली पेप्सी छाडेर एप्पलसँग जोडिए। सुरुमा सबै राम्रै चलिरहेको थियो। एप्पलले केहि कम्प्यूटरहरु बजारमा ल्यायो जसले धेरै राम्रो काम गरिरहेको थियो। तर पछि स्टिभ जब्स र जोन कली बीचको केहि बहसको कारण, जोन कलीले आफ्ना केही बोर्ड सदस्यको साथमा स्टिभ जब्सलाई कम्पनीबाट निकाले। स्टिभ जब्सले सुरु गरेको कम्पनीबाट उनलाई नै हटाइयो। त्यसबेला आफूलाई निकै नराम्रो लागेको उनले बताएका थिए। तर स्टिभ जब्सले हार मानेनन् र नेक्स्ट नामको अर्को कम्पनी खोले, त्यो सफ्टवेयर कम्पनी थियो। पछि उनले भिडियो एनिमेसन कम्पनी पिक्सार पनि स्थापना गरे।
सन् १९९७ को अन्त्यसम्ममा एप्पल कम्पनी डुब्ने कगारमा थियो। कम्पनीले कम्प्युटर बाहेक अन्य वस्तुहरू पनि बेच्ने काम गरिरहेको थियो। पछि कम्पनीको बोर्ड सदस्यहरूले स्टिभ जब्सलाई सीईओको रूपमा कम्पनीमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरे। एप्पलले पछि स्टिभ जब्सको कम्पनी नेक्स्ट र पिक्सार किन्यो। स्टिभ जब्स एप्पलमा फर्किए, पछि उनले कम्पनी कम्प्युटर भन्दा पनि अन्य वस्तुहरू बेच्न व्यस्त भएको देखे।
उनले सबै वस्तुहरू बन्द गरे र तथ्याङ्क अनुसार केही वस्तुहरू मात्र राखे। उनले भने, ‘हामीले सबै बेच्नु पर्दैन।’ पछि २००१ मा, एप्पलले आइपोड लन्च गर्यो, जुन फेरि एप्पलको लागि राम्रो साबित भयो। रेडियो बजारमा आइपोड धेरै राम्रो बिक्यो। त्यसपछि एप्पलको बारेमा सबैलाई थाहा हुन थालिसकेको थियो। पछि उनले आफ्नो म्याकबुक पनि लन्च गरे, जुन अझै पनि एप्पलको धेरै राम्रो उत्पादन हो।
समय बदलिरहेको थियो, अब स्मार्टफोनको जमाना आउन लागेको थियो। त्यतिबेला पनि स्मार्टफोनहरू थिए तर त्यति एडभान्स थिएनन्। त्यसपछि एप्पलले आफ्नो नयाँ उत्पादन आइफोनमा काम गर्न थाल्यो। २००७ मा, पहिलो आईफोन लन्च गरिएको थियो, जुन पूर्ण टच स्क्रिनको साथ आएको थियो। यसमा बटन पनि थिएन, यो आम मानिसका लागि पनि नयाँ फोन थियो। आईफोनले एप्पललाई फरक स्तरमा पुर्यायो। अब एप्पल संसारको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बनिसकेको थियो।
यसैगरी, उनले मानिसहरूलाई ठूलो स्क्रिनको अनुभव दिन आईप्याड लन्च गरे। आईप्याडमा, मानिसहरूले न्यूजपेपर, भिडियो आदि जे पनि हेर्न सक्थे। एप्पलले सधैं आफ्ना ग्राहकहरूको मनको कुरा पूरा गरेको छ।
सन् २००३ अक्टोबरमा उनलाई क्यान्सर भयो र २००४ को मध्यतिर उनले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई प्यानक्रियाजमा ट्युमर भएको बताएका थिए। त्यसपछि उनले उपचारका क्रममा सन् २००९मा लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरे। त्यसपछि उनले सन् २०११ मा सीईओ पदबाट राजिनामा दिए र टिम कुकलाई सीईओको रुपमा आफ्ना उत्तराधिकारीको रुपमा नाम दिएका थिए। त्यसको ६ हप्तापछि अक्टोबर ५, २०११ मा उनको निधन भयो।
स्टिभ जब्स को सफलता को रहस्य के हो?
स्टिभ जब्सले समय समयमा राम्रो उत्पादनहरू बनाए। केही सफल भए, केही भएनन्, तर तिनीहरूले एउटै कुरामा ध्यान केन्द्रित गरे, त्यो हो, ‘हामीले गर्वका साथ बेच्न सक्ने उत्कृष्ट उत्पादनहरू बनाउनु पर्छ।’ उनीहरू सधैं राम्रो उत्पादन बनाउन केन्द्रित छन्। उनले हरेक उत्पादनबाट जनताको ज्वलन्त समस्या समाधान गरेका छन्। यही कारणले गर्दा स्टिभ जब्स सफल व्यक्ति हुन्।